I-Alcatel 1X 2019 isungulwe ngokusesikweni eSpain | I-Androidsis
Iselfowuni sele isishiyile ngee-smartphones ezininzi ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka. Inkampani ibikho kwiminyhadala emibini esele sinayo ukuza kuthi ga ngoku, njenge CES 2019 kunye MWC 2019 ibibanjwe kwinyanga ephelileyo. Kuzo zombini ezi ziganeko basishiyile nee-smartphones ezintsha. Enye yeemodeli eziboniswe luphawu ukuza kuthi ga ngoku YiAlcatel 1X 2019, nesandula ukwenziwa ngokusemthethweni eSpain.
Yimodeli phakathi kwinqanaba eliphakathi kunye nenqanaba lokungena. Njengesiqhelo, le Alcatel 1X 2019 ibonakalisa ukucaciswa okuhle kuluhlu lwayo, ukongeza kwixabiso elifanelekileyo lemali. Yintoni esinokuyilindela kwesi sixhobo sophawu?
Kulabo bathengi banomdla kuyo, Ngoku kunokwenzeka ukuthenga le Alcatel 1X 2019 ngokusemthethweni eSpain. I-brand sele ibhengeze ukumiliselwa kwayo kwilizwe lethu. Inokuthengwa kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso, zombini kwiivenkile ezikwi-Intanethi nakwizinto ezibonakalayo.
Le Alcatel 1X 2019 isungulwe kwi-RAM enye kunye noqwalaselo lokugcina, kunye ne-2 GB ye-RAM kunye ne-16 GB yokugcina. Nangona abasebenzisi beya kuthi ukwazi ukuthenga ngemibala emibini. Kuba iphehlelelwe ngombala omnyama nohlaza okwesibhakabhaka ezivenkileni, imibala esinokuyibona kumfanekiso ongentla. Zombini ezigqityiweyo zibhaliwe, njengoko kuqinisekisiwe yinkampani.
Ngokubhekisele kwixabiso, kunokwenzeka thenga le Alcatel 1X 2019 ngee-euro ezingama-119 eSpain. Ixabiso elifikelelekayo, elenza ukuba ibe yinto elungileyo kubasebenzisi abangenayo ibhajethi enkulu kakhulu yokuthenga iifowuni. Inikwe njengeyona ndlela ilungileyo ngaloo ndlela.
Ke ngoko, ukuba unomdla kule fowuni, ungayithenga ngokusemthethweni eSpain. Inketho elungileyo yokujonga abathengi ngokumalunga noku. Ucinga ntoni ngale modeli yohlobo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Alcatel 1X 2019 isungulwe ngokusemthethweni eSpain
Siza kubona ukuba i-Alcatel entsha injani, ijongeka intle kwaye kubonakala ngathi ixabiso elinconyelweyo endiye ndakwazi ukufumanisa ukuba lifikeleleke.